ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေး – Hlataw.com
ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ။ကာယကံရှင်ရဲ.နာမည်ကိုလွဲထားပါသည်။လွန်ခဲ့တဲ့ 2004/2005လောက်ကပေါ့ တစ်နေ့ ကျနော်အလုပ်က ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း အမေဖြစ်သူက သားရေ မနက်ဖြန်ပိတ်ရက်မဟုတ်လား အမေ ဥပုသ်ကျောင်းသွားမလို့ အဲ့တာ သင်္ဘောဆ်ိပ်နားကညဈေး သွားပြီး အမေ့ကို ဆွမ်းချက်စရာလေး တွေ သွားဝယ်ပေးပါလား အာ … သားမှပစ္စည်း ဈေးမသိတာ တော်ကြာအမေကဆူဦးမယ် အမလေးခိုင်းတောင်မခိုင်းရသေးဘူး နင်တစ်ယောက်ထဲ မသွားရပါဘူး ဘေးအိမ်က အန်တီငယ်ပါလိုက်မှာ အင်းအာ့ဆို သားညကျ ဘောလုံးပွဲ သွားကြည့်မှာနော် အေးပါ သွားသွား ဟီး အာ့ဆိုသွားပေးမယ် အန်တီငယ်ဆိုတာ က ကျွန်တော်တို့ အခုနေနေတဲ့အိမ်ကြီးကို သူတို့ဆီက ဝယ်ထားတာ ပြောရမယ်ဆို ရင် နှစ်လုံးထီ သုံ့းလုံးထီ ရောင်းတယ် လင်ရော မယားရော နောက်တော့ ရဲဖမ်းခံရတယ် ဆိုလား အဲ့တာကြောင့် အိမ်ရောင်းဘာရောင်းနဲ့ အခု သမီးအကြီးဆုံးအိမ်မှာ မိသားစု တစ်စုလုံးနေကြတာဗျ အန်တီငယ်က မအူပင်သူ သူ့ယောက်ျားက အစကရဲ တဲ့ ဘယ်လိုပြုတ်သွားလဲ တော့မသိဘူး အန်တီငယ် ပြောပြောနေတာ ငါ့ကို သူကလိမ်ခေါ်ပြီး ခိုးပြေးလာတာ သူစခန်းမှုးဘဝတုန်းကလေ ငါကရွာမှာ ကွမ်းတောင်ကိုင်ပေါက်စလေးပေါ့ ခိုးပြေးတုန်းကငါ အသက်တောင် မပြည့်သေးဘူး အခုများတော့လား အန်တီငယ်ပြောတာ ဟုတ်လောက်တယ်ဗျ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အခုအသက် ၄၈တဲ့ ကလေး ၄ယောက်အမေ သာဆိုတာ လက်မောင်းသားတို့ဘာတို့ဆို တင်းနေတုန်း ဖင်ကြီးတွေကလဲ ကားတုန်းဗျ ဖရိုဖရဲ နေနေလို့သာ အသားဖွေးတော့ နုတယ်ထင်ရတာ တစ်ခါတလေ ဘော်လီတွေ ဘာတွေတောင် မဝတ်ဘူး ကွမ်းကလဲ စားသေး မိန်းမကြမ်းကြီးပုံစံနဲ့ပေါ့ ရေချိုးရင် တောင် တစ်ခါတစ်ခါ ထမိန်ကို ခါးလောက်ဝတ်ပြီး စပ်ပြာတိုက်တာ ဟဲ့ အောင်အောင် မပြီးသေးဘူးလား ကြာလိုက်တာ အဲ့လောက်ပြင်မနေနဲ့ နင်နဲ့ငါ သမီးရည်းစား ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မှာ မဟုတ်ဘူး ဟဲဟဲ လာပြီ အန်တီငယ် ရေ ဆိုင်ကယ်ကို ထုတ်ပြီး ရပြီ အန်တီငယ်တက် ဘေးတစ်ဇောင်းတက်ပြီး အန်တီငယ် မိမိခါးကို လာဖက်လေသည်။
ဟိုက်လောလောနဲ့ငါထွက်လာတာ ရေချိုးပြီး အတွင်းခံတောင် မဝတ်လာမိဘူး လမ်းကသိတယ်မှတ်လား ဒလလမ်းလေ ဆိုင်ကယ်ကမြင်းစီးရသလိုပဲ ခုန်ပေါက်နေတော့ အန်တီငယ် နို့ကြီးတွေက ကျောကိုလာလာပွတ်ပါလေရော နူးညံတဲ့ အထိတွေ့ကြောင့် ချိုင့်တွေကိုတမင်တကာကို ရွေးရွေးပြီးချချပေးပြီး ကျောကို ကပ်ထားမိလိုက်တယ် မသာလေး ကျောအရသာခံချင်လို့ ချိုင့်ပဲရွေးချနေ ငါ့ဖင်နာတယ်ဟဲ့ မဟုတ်ပါဘူး အန်တီငယ်ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကမီးအပေါ်ထောင်နေလို့ ချိုင့်မမြင်ရတာပါ သြော်ဟုတ်လား ပြောပြောဆိုဆို မငယ်လေး ခါးကိုင်ထားသောလက်နှင့် အောင်အောင် လီးကိုကိုင်လိုက်ရာ ဟာ…အန်တီငယ် အမလေးလေး လီးကြီးကနဲတာကြီးမဟုတ်ပါလားလူနဲ့ လီးနဲ့မလိုက်ဘူး ပြောစမ်းပါဦး အရသာမခံဘဲ ဒါကြီးတောင်နေတဲ့ အကြောင်းလေး တော်တော်နှာထနေတယ်ပေါ့ လူကဖြင့် အသက်၂၀ မပြည့်သေးဘူး ဈေးဝယ်ပြီးမှ နင်နဲ့ငါတွေ့မယ် မငယ်လေးတစ်ယောက် ဈေးသာဝယ်နေတာ စိတ်က အောင်အောင် လီးကြီးဆီရောက်နေသည် နဲ တာကြီးမဟုတ်ဘူးတူသည် အဲ့ဒါကြီးနဲ့သာဆို အိုအိုး အမကြီး ဘာယူမလဲ ကြက်သားဘယ်ဈေးလဲ . ဈေးဝယ်ပြီး အောင်အောင် ရပြီ မောင်း နင့်မှာ ပိုက်ဆံ ပါသေးလား ဟုတ်ပါတယ် အန်တီငယ် ပါရင် ဘုံးဘုံ ဝင်လိုက် ဗျာ မဗျာနဲ့ ဝင်လိုက် ဒါကြီးကို ရှင်ပြုပေးမလို့ အန်တီငယ် မိမိ ပခုံးကို မှီကာလီးကို ကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးနေသည် နင့်ဟာကြီးက ကြီးပြီးရှည်လျုက်တာ အဲ နင် ဂေါ်လီတွေဘယ်နှစ်လုံးတောင် ထညိ့ထားတာလဲ ဟို အပေါ်၎လုံး အောက် ၄လုံး အမလေးလေး ဘုံးဘုံရောက်တော့ တစ်ဆက်ရှင် ယူလိုက်သည် ဒီတည်းခို ခန်းက သိပ်မကောင်းပေမဲ့ ဂျောင်ကျ သောကြောင့် အန်တီငယ်ရွေးခြင်းတူသည် မီးတွေ ဖွင့် နောက်ကနေ အန်တီငယ့်ကိုဖက်ကာ ဖင်ကြားထဲ လီးကြီးနှင့် ထောက်ထားလိုက်သည် မသာလေး နေဦး ငါ့အဝတ်တွေကြေလို့မရဘူး ငါချွတ်လိုက်ဦးမယ် အန်တီငယ် အဝတ်တွေ ချွတ်ချလိုက်ရယ ဖြူ ဝင်း နေသော နောက်ပိုင်းနှင့် ကားနေသော ဖင်ကြီးကြောင့် လီးကြီးမှာ တဆက်ဆက် တောင်ပြီးတုန်လာသည်။
အနောက်ကနေ သိုင်းဖက် ဖင်အောက်ကြား လီးကိုထည့်ကာ လိုးသလိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီး လက်တွေက တွဲနေသော ကလေး ၄ယောက်အမေ နို့နှစ်လုံးကို ခြေလိုက် နို့သီးခေါင်းကြီးတွေခြေလိုက်လုပ်ပြီး နုတ်ခမ်းတွေက လယ်တိုင်နှင့် ပခုံးသားတွေကို နမ်းလျှာနှင့်ယက်ပေးလိုက်သည် မငယ်လေးမှာ အင်း ကောင်လေး က ဆရာကြီးပဲ ငါရွေးတာ မှန်နေပြီ သူလုပ်တာတွေ ငါငြိမ်ပြီးနေပေးမှ အောင်အောင်လက်တွေက နို့နှစ်လုံးကိုအပြိုတစ်ယောက်နို့ကိုင်သလိုဖြေးဖြေးခြင်းမခြေပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခြေနေရာ မိမိမှာ အပျိုတစ်ယောက် မဟုတ်ပေမယ့် လင်ကလဲမပေးတာကြာပြီ ပေးတော့လဲ ထမိန်လန် တက်လိုး ဆိုတော့ ယခုလို နှစ်ဆယ်ကျော်ကျော် လီးကလဲ စံချိန်မှီပြီး ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း ကိုင်တွယ်နေသော အောင်အောင်ကြောင့် ကာမရှေ့ပြေးအရည်တွေပင် ပေါင်ပေါ်စီးကြနေပြီ အဟင်း…….ကျွတ် တီငယ် နို့တွေစို့ပေးပါလား ကြာ အင်း အာ့ဆို တီငယ် လှဲလိုက် တီငယ် ပက်လက်လှန်လိုက်ရာ အားပါးမဲနက်နေသောအမွေးတွေက တောထနေသည် ဟင်ပေါင်မှာ အရည်တွေပါလား ပါးစပ်က တီငယ်၏ ဘယ်ဘက်နို့သီးခေါင်းကို ငုံကာလျှာနှင့်လိမ့်ပြီး နို့အုံနှင့်ရောကာ ငုံပြီးစုပ်ချလိုက်သည် အင့် အား…..ကောင်းလိုက်တာကွာ စို့ပေး ကောင်းလိုက်တာ တီငယ့်နို့တွေ ပြုတ်ထွက်ခြင် ထွက်ပစေ စို့ပေး အောင်အောင် အားရပါရ နို့တွေကို စို့နေရင်း လက်တစ်ဖက်ကို အဖုတ်အမွှေးတွေကို ခပ်ဖွဖွနုတ်သလို ဆွဲဆွဲ ပေးပြီး အက်ကွဲကြောင်း ထိပ် စောက်စေ့နေရာ ကိုစမ်းလိုက်သည် အားပါး အစေ့က တော်တော် ကြီးတာပဲ လက်ခလယ်ကို စောက်ဖုတ်ဝထဲ ထိုးထည့် လိုက်သည် အင်း…ဟင်း…. ဟင်း… လိုးတော့ကွာ တီငယ် မနေနိုင်တော့ဘူး လိုးသေးဘူး တီငယ်နို့ကြီးတွေကို အရင်လိုးမှာ သဘော သဘော ကိုယ်တော်လေး သဘော အောင်အောင် မိမိ နို့ပေါ် ခွလိုက်ရာ အနီးကပ်မြင်လိုက်ရသော လီးကြီးကြောင့် အမလေးလေး ကြီးပြီး ရှည်လိုက်တာ ၈လက်မလောက်တောင်ရှိမယ် တီငယ်စုပ်ပေးပါလား အင်း လာ ဟာအဲ့လို မစုပ်နဲ့ရဘူး နို့နှစ်လုံးကြားက ထွက်လာမှ စုပ်ပေးနော် ပြီးရင် အန်တီငယ့် ဖုတ်ကြီးကို ပြန်မှုတ်ပေးမယ်နော် ရတယ် မလုပ်နဲ့ ခုအောင့် လီးကြီးနဲ့ တီငယ့်နို့ကိုလိုးမယ်ဆို လိုးလေ အောင်အောင် အန်တီငယ် နို့နှစိလုံးကို ပူးပြီး လီးကို တစ်ဖြေးဖြေးခြင်း ထိုးထည့်လိုက်သည်။
ဂေါ်လီဖုတွေက ဖြေးညင်းစွာပွတ်သပ်ကာ နီရဲ ပြောင်တင်းနေသော ဒစ်ထိပ်ကားကားကြီးက နို့နှစ်လုံး ကြားမှ နေ ပြူးကနဲ ထွက်လာသည် အန်တီငယ်လေး စုပ်ပေးလေ အင်း …ပြွတ် အား …ကောင်းလိုက်တာ အန်တီငယ်ရယ် ၁၀ ချက်ကျော်ကျော်လောက် နို့ဖွေးဖွေးကြီး နှစ်လုံးကြား ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် လုပ်ပေးလိုက် အန်တီငယ်လေးက. စုပ်ပေးလိုက် နှင့် စတွေးတွေ မိမိအရည်ကြည်တွေကြောင့် နိ့ကိုလိုးရသည်က ပိုကောင်း လာသည် ခပ်သွက်သွက်လေး အချက်၅၀ခန့် လိုးပေးပြီး လီးကြီးကို နို့တွေကြားမှ ထုတ်ကာ အန်တီငယ် ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်သည် မငယ်လီးကြီးကို လျှာဖျားနှင့် သိမ်းကာ စုပ်ပေး လိုက်သည် ပါးစပ်နဲ့ပင် သိပ်မဆံ့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ် ဒစ်ကြီးကို အားပါးတရ စုပ်စုပ်ပေးနေရာ အ ….အား ကောင်းလိုက်တာ အန်တီငယ်ရယ် မနေ နိုင်တော့ဘူး လိုးတော့မယ် အင်းလိုးတော့ အောင်အောင် အန်တီငယ်လေး ကို ခုတင်းဇောင်းနား ရွှေ့ ပေါင်နှစ်ချောင်း ဆွဲဖြဲ ပခုံးပေါ်. ခြေထောက်နှစ်ချောင်းတင်ကာ ဒစ်ထိပ်ကြီးနှင့် အက်ကွဲ ကြောင်းအထက်အောက် ဆွဲဆွဲ စော့ စောက်စေ့ကို ဒစ်ထိပ်နှင့်ကစားပေးနေရာ အမလေးလေး ကိုယ်တော်ရယ် လီးကြီးကို အဖုတ်ထဲထည့်ပါတော့ ဒီမှာမနေ နိုင်တော့လို့ပါ အန်တီငယ် ခမျှာ ဖင်ကြီးကြွကြွပြီး ကော့ပြန်လန်နေသည် အောက်မှဖင် ကအကြွ မိမိလီးကြီးကို အားနှင့် စောင့်သွင်း ချလိုက်သည် ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ် ဒုတ် အား…. ရှီး…..အီး… လီးတစ်ချောင်းလုံး စောက်ခေါင်းတွင်း နေရာလပ်မကျန်အောင် ပြည့်ကျပ်စွာဝင်လာသလို ဂေါ်လီတွေကလဲ စောက်စေ့ကြီးကို ထုတ်ကနဲ ထုတ်ကနဲ ထိထိမိမိ ပွတ်တိုက်ကာ သားအိမ်ကို လာထောက်ရာ အောင်အောင် တဆုံးမထည့်နဲ့ နင့်ဟာကြီး သားအိမ်ကိုလာထောက်တာ နာတယ် အောင်အောင် ဖြေးဖြေးခြင်း လီးကို အကြိမ်နှစ်ဆယ်ခန့် တစ်ဝက်လောက်သာထည့်ပြီး လိုးပေးလိုက်ရာ အန်တီငယ်တစ်ယောက် ဖင်ကြီးကိုအောက်မှကော့ကော့ပေးနေသည်။
အန်တီငယ်ကောင်းလား ဟင် အင်းကောင်းတာအရမ်းပဲ အဲ့တာဆို ကျွန်တော့လီးနဲ့ အန်တီငယ်လေး ယောက်ျားလီး ဘယ်သူပိုကြီးလဲဟင် မင်းရဲ့လီးကြီးက ပိုကြီးတာပေါ့ပြီးတော့ ဂေါ်လီတွေကတန်းစီ နေတာပဲ ပြောလဲပြော လိုးလဲလိုး အောင်အောင် လီးကို တစ်ဝက်လောက်လိုးနေရာမှ အဆုံး ထိုးထည့်လိုက်သည် အင့် အားအား…. ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ် အား ရှီး…. ကောင်းလိုက်တာအောင်အောင်ရယ် အန်တီငယ်လေးမှာ မိမိခါးကိုဖတ်ပြီး သူ့အဖုတ်ထဲ ဝင်နေသည့်လီးကြီးကို ကြည့်ကာ ကောင်းလိုက်တာ စောင့်စောင့် အား……အီး မညှာနဲ့ စောင့်သာစောင့် အန်တီငယ်၏ နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်ကာ အောင်အောင် အားနှင့် စောင့် စောင့်လိုးပစ်လိုက်သည် အား ….အား အင့် အီး…….အား….. .အာ…..အိုး အား….လိုး လိုး စောင့် စောင့် အန်တီငယ်လေး အဖုတ်ကြီးကွဲအောင်သာစောင့် အနှစ်နှစ်အလ လ မရခဲ့သော ကာမရမက်တွေ က အခုမှပဲ ပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးကိုရနေတော့သည် ဘေးအခန်းတွေလူရှိတာ မရှိတာပင် ဂရုမစိုက်နိုင် ဒီလိုလီးကြီးနဲ့သာဆို လူလယ်ကောင်တောင်ခံ မိမလားမသိ အိုး အိုး အိုး…. အောင်အောင်တစ်ယောက် မိမိကိုချိုင်းမှ မ မက်တပ်ကြီးရပ်ကာခါးကြီးကိုကော့ကော့ပြီး အားနှင့် တဆုံးစောင့်လို့းတော့သည် ဖြောင်း…..ဗြွတ်…..အီး…..အမေ့ အား…. ထိသည် ထိတာမှ ထိထိ မိမိကြီးကို ဂေါ်လီတွေက စောက်စေ့ကို ထိထိမိမိကြီး အဝင်ရော အထွက်ရော လီးကြီးကလဲ သအိမ် ကိုဒုတ်ခနဲဒုတ်ခနဲ အီး……ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ် လိုးတဲ့အရှိန်တွေက ပိုပိုမြန်လာရာ မိမိဖင်နှင့် သူ့ပေါင် ရိုက်သံတွေ ကလဲ ဆူညံ လာသည် အား…..စောင့် စောင့် အရှိန်မလျော့ နဲ့ စောင့် အ အား…. အား …. လိုးလိုး စောင့်သာလိုး ပြီးတော့ မယ် အား…..အီး…….လိုး…..အား…… အ .အာ အား………. မိမိမှာ လဲ ပြီးခါနီးနေပြီမို့ ခပ်သွက်သွက် အားနှင့် စောင့်လိုးပြီး…… နှစ်ယောက်သား ဆက်ကနဲ ဆက်ကနဲ တုန်သွားကာ ကုတင်ပေါ် လှဲချလိုက်လေ တော့သည်။
ကောင်းလိုက်တာ အန်တီငယ်လေးရယ် တီငယ်လဲ အရမ်းကောင်း တယ်ကွာ မင်း ရဲ့ လရည်တွေ နဲ့ ဇိမ်ခံ ခြင်တာအချိန်ကမရှိတော့ဘူးမနက်ဖြန် မနက် တီငယ် ဥပုသ်ကျောင်း မလိုက်တော့ဘူး အောင်အောင် အိမ်လာခဲ့မယ် ထက်လိုးပေးနော်…. ဗျာ တစ်ကယ်နော် တစ်ကယ်တစ်ကယ်ဒီက မင်းရဲ့ ဒီလီးကြီးကို စွဲလမ်းနေပါပြီ သိရဲ့လား… ပြောကာ လီးကြီးကို ငုံ ပြီးစုပ်ပေးကာ ထတော့ ပြန်မယ် မိုးတစ်အားချုပ်နေမယ် အိမ်ပြန်ရောက် ရေမိုးချိုးပြီး ဘောလုံးပွဲ ထွက်ကြည့်တော့ အန်တီငယ် ဘောပွဲ ကြည့်နေရာမှ အောင်အောင် လာလေ ဒီမှာလာထိုင် ကြည့်လိုက်တော့ အန်တီငယ် သူ့ယောက်ျားဘေးမှာထိုင်နေပြီး သူ့သမီးအကြီးနှင့် သူ့သမက်တို့ တူတူတစ်ဝိုင်းထဲ ထိုင်နေရာ မိမိလဲ ရောထိုင်လိုက်သည် ပထမပိုင်းကပြီးတော့မည် လူကလဲ နဲနဲ ငိုက်လာတော့ အမေ ဟိုမှာကြည့် အောင်အောင် ငိုက်နေပြီ ခစ်ခစ် ခစ် ဟဲ့အောင်အောင် ငိုက်နေတာလား အန်တီငယ်လဲပထမပိုင်းပြီးရင် ပြန်မှာ တူတူပြန်ကြမယ် ဟုတ် တူတူပြန်မည် ဆိုသောစကားကြောင့် အောင်အောင်အိပ်ခြင်ပြေသွားသည် ရော့ အောင်အောင် နင်ကွမ်းစားလိုက် အိပ်ချင်ပြေတာ ပေါ့ ဟုတ်ကျေးဇူး မအိအိမျိုး ကွမ်းငုံပြီး အိအိမျိုးကို ကြည့်တော့ သူကပြန်ပြုံးပြသည် ပြောရဦးမယ်ဗျ အိအိမျိုးဆိုတာ ကလေး အမေ ကလေးတောင် သူငယ်တန်းတက်နေပြီ ကျုပ်အိမ်စစပြောင်းတဲ့နေ့ သူ့ကိုတွေ့တော့ အ ပျိုထင်တာဗျအသားအရေက ဖြူတယ်လို့ ပြောတာထက်ဝင်းတယ်လို့ ပြောရင်ပိုမှန်မယ် တစ်ခြားကလေးအမေတွေလို ဗိုက်တွေဘာတွေ မပူဘူး ဗိုက်လေးကခြပ်ပြီး ဖင်က မကားဘူးဗျဆူဖြိုးဖြိုးနဲ့ အပေါ်ကိုကောက်နေတာ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် အရမ်းမပိန်ဘူး တစ်ခါသူပိုက်စံချေးတော့ ပြောဖူးတယ် လင်နဲ့အဆင်မပြေဘူး အိမ်မှာနေရတာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ နောက်မှသိတာ သူ့လင်ကလီးကသေးသေးလေး လိုးရင်လဲ ခဏပဲတဲ့ ကျုပ်လိုးချင်တာ သူ့ကို ဖန်လို့မရလို့ အောင်အောင် ပြန်မယ်လေ ဗျာ ဟုတ် အန်တီငယ် ယောက်ျား ရှင်ရော လိုက်မှာလား မလိုက်တော့ဘူး ပြီးမှ ပြန်မှာ အဲ့တာဆို မိန်းမပြန်တော့မယ် အေးအေး အိမ်နားရောက်တော့ အန်တီငယ်က သူ့အိမ်အခြေနေ လှမ်းကြည့်ပြီး ရပြီ လာ နောက်ဖေးကို သူ့အိမ်ခေါင်းရင်းကနေ နောက်ဖေးရေချိုးတဲ့ နား ရောက်တော့ အောင်အောင် တီငယ် လုပ်ပေးမယ် ဗျာ ဘာလုပ်မှာလဲ။
မင်းကို စုပ်ပေးမယ်ပြောတာ ပြောလဲပြော လက်ကပုဆိုးလှန်ပြီး လီးကို ဂွင်းတျုက်သလို လုပ်ပေးတော့ လီးကြီးက ချက်ခြင်း ဒေါင်ကနဲ တောင်လာတာပေါ့ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် အောင်အောင် ပြီးခြင်လာပြီဆိုတီငယ်လေး ပစ္စည်းထဲမှာပဲ ပြီးပေး တီလေးတို့ အရွယ်တွေက အောင်အောင်တို့အရွယ် လရည်ဝင်ရင် အားရှိလို့ ဟုတ်ကဲ့ တီငယ်လေး ဒူးထောက်ကာ မိမိလီးကြီးကို စစုပ်တော့သည် ပူနွေးနေသောအာငွေ့ကြောင့် လီးကြီးက အရည်ကြည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာတော့ တီငယ်လေး မျိုမျိုချလိုက်သည်တူသည် လီးတစ်ခြောင်းလုံးကို လျှာနှင့် ယက်လိုက် ဥနှစ်လုံးကို စုပ်လိုက်နှင့် မို့ မိမိမှာ အရသာတွေ့နေသည် အဆိုးဆုံးကဒစ်ထိပ်ကို အားပါးတရစုပ်ပြီး ထိပ်ကိုလျှာနှင့် ကစားခြင်းပင် အီး….. တီငယ်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ ဘယ်လိုများလုပ်နေတာလဲ ပြီးတော့မယ်ဆို လိုးပေးနော် ဟုတ် အန်တီငယ်က လီးကြီးကိုဘအားပါးတရစုပ် အောင်အောင်မှာ ရေတိုင်ကီကိုကိုင်ပြီး ဖီးတွေတက်နေခိုက် အန်တီငယ်လေး သမီးအလတ်မ မီမီမြင့်မှာ သေးပေါက်ခြင်သဖြင့်တရေးနိုးထအလာ အသံတွေကြားသဖြင့် အပြင်ဘက်သို့အသာချောင်းအကြည့် အိုး မေမေပါလား ဘေးအိမ်မှကိုအောင်လီးကြီးကို အားပါးတရ ရေခဲချောင်းစုပ်သလို စုပ်နေရာ ကိုယ့်မျက်လုံးပင် ကိုယ်မယုံ ကိုအောင်လီးကြီးမှာကြီးချက် တစ်ခါမှ အဲ့လောက်ကြီးကြီးတာ မမြင်ဖူး မိမိ အဖေလီး နှင့် မိမိခဲအို လီးတွေကို တစိခါတလေမြင်ဖူးသည် ဒါပေမယ့် သူတို့က ကိုယ်အောင် လီးတစ်ဝက်တောင် မရှိလောက် ကြည့်နေရင်း ကိုအောင် ထကာ မေမေ့ကို ရေတိုင်ကီ နှစ်ခုကြား တင်ပေါင်ဖြဲပြီး သူ့လီးကြီးကို မေမေ့ အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ကာ အားပါးတရ လိုးတော့သည် မေမေခမျှာလဲ တအားအားနှင့် တွန့်တွန့် လူးပြီးနှစ်ယောက်သား ငြိမ်ကြသွားရာ မိမိလဲ သေးမပေါက်တော့ပဲ အိပ်ယာထဲ လှဲကာ ကိုယ်အောင့်လီးကြီးကို မြင်ယောင်ပြီး အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည် မီမီမြင့် အိပ်ရာကနိုးနိုးခြင်းမထသေးဘဲ ညကမေမေနှင့် ကိုအောင်တို့ နောက်ဖေးတွင်လိုးနေကြပုံ ကိုတွေးကာ အင်း ဒါဘယ်လိုများဖြစ်တာလဲမသိဘူး ကိုယ်အောင် ကလဲ လီးကြီးကနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး မီမီမြင့် အိပ်ယာကထပြီး နောက်ဖေး ရေစည်နား ငုတ်တုတ်ထိုင် သွားတိုက်နေခိုက် မြင်လိုက်ရသော မြင်ကွင်း ကြောင့် ကြက်သေသေကာ ကြောင်ကြည့် နေမိသည်။
ကိုအောင်တစ်ယောက် အိမ်သာတခါးကြီး ဖွင့်ပြီး ပုဆိုးမကာ လီးကြီးကို ဘယ်လက်ဖြင့် ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေသည် မျက်လုံးကြီးကိုမှိတ် ခေါင်းမော့ပြီး တခုခုကို အရသာခံနေသည့်ပုံ အိမ်တွင် မေမေတို့မရှိခိုက် အန်တီငယ်လေးကို ကြာကြာလိုးနိုင်ရန် အိမ်သာထဲ ဂွင်းဝင်ထုချင်းပင် မိမိအိမ်တွင်ဘယ်သူမှ မရှိ သဖြင့် အိမ်သာတခါးဖွင့်ကာ ထုနေခိုက်… အန်တီငယ်လေးသမီးလတ် မီမီမြင့် နောက်ဖေးပေါက်မှ အောက်ဆင်းသွားတိုက်နေသည် သူ့ဘက်ကိုလှည့် ဖီးတက်ကာနေသည့်ပုံနှင့်မျက်လုံးမှေးခေါင်းမော့ကာ ချောင်းတစ်ချက်ဟန့်ပြီး မသိမသာကြည့်လိုက်သည် မီမီမြင့် ကြောင်ပြီး မိမိလီးကြီးကို သေချာကြည့်နေလေသည် အောင်အောင် ခါးကြီးကိုကော့ကာ လီးကို ပိုမိုမြင်သာစေရန် ခပ်မြန်မြန်လေးထုနေရာမှ အရှိန်လျော့ကာ တစ်ချက်ခြင်း ထုပြီး အရသာရှိလှသည့် ပုံလုပ်ပြလိုက်သည် လီးတံ ညိုညို တုတ်တုတ်ကြီး ထိပ်မှ ဒစ်ရဲရဲကြီးမှာ ကားကနဲ ကားကနဲမို့ မီမီမြင့်တယောက် မျက်တောင်မခက် နိုင်ပဲ သွားတိုက်ဆေးတွေပင်ယောင်ကာမျိုချ မိသည် ပြီးမှသတိဝင်လာပြီး ပလုပ်ကြင်း မျက်နှာလွှဲလိုက်သည် မျက်နှာသာလွှဲလိုက်ရပေမယ့် စိတ်က လီးကြီးကို မကြည့်ပဲ မနေနိုင် မသိမသာကြည့်လိုက်သည် ကိုအောင် လက်တွေကမြန်လာသည် အားရပါးရ ကြီးကို ဖြစ်နေသည့်ပုံ အောင်အောင်တစ်ယောက် မထိန်းနိုင်တော့ မီမီမြင့် ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရာ ဖီးတွေတက်လာသည်မို့ သုတ်တွေ ပန်းလွှတ်ပလိုက်သည် ကိုအောင်တစ်ယောက် လက်တွေတအားမြန်လာပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြီး တောင့်ကာ ခါးကဇက်ခနဲဇက်နဲ ရှေ့ကို တွန်ပြီး လီးထိပ်မှ အရည်ဖြူဖြတွေ ပန်းကာ ငြိမ်ကြသွားသည် ပြီးနောက် မိမိကို ရယ်ပြသဖြင့် မီမီမြင့်ရှက်ကာ အိမ်ပေါ် ပြေးတက်သွားလေတော့သည်။ သမီးရေ အမေ အောင်အောင်တို့အိမ်မှာနော် သူ့အမေ ဥပုသ်သွားစောင့်လို့အပြန် စားလို့ရအောင် တစ်ခုခုသွားချက်ပေးဦးမယ် ညည်းအဖေ ပြန်လာရင်လှမ်းခေါ်လိုက် ဟုတ် အမေ အမေ့ကြည့်ရတာ မူမမှန်ဘူး ရေတွေဘာတွေ စောစောစီးစီးချိုးလို့ပါလား အဖေက ညနေဇောင်းမှ ပြန်လာနေကြကိုများ ငါတစ်အောင့်နေရင် နောက်ဖေးပေါက်က တက်ချောင်းကြည့်ဦးမယ်။
မီမီမြင့် နာရီဝက်ခန့်အကြာ မယောင်မလည်နှင့် ကိုအောင်တို့အိမ်ရှေ့ကိုသွားကြည့်ရာ အိမ်ရှေ့တခါးမကြီးပိတ်ထားပြီး သီချင်းသံတိုးတိုးလေးဖွင့်ထားသံကြားရသဖြင့် လူအလစ်ကြည့်ပြီး ခြံထဲဝင် နောက်ဖေး မှ အသာတက်ပြီး လိုက်ကာကြားမှ ချောင်းကြည့်လိုက်ရာ အို အောင်ကလဲကွာ မမ လုပ်ပေးမယ်လေ မရပါဘူး မမကလဲ ပြန်လုပ်ပေးမယ် မလုပ်နဲ့လေ ငရဲကြီးကုန်မယ် ကြီးကြီး ရတယ် ဒီလိုလုပ် မီမီမြင့်ကြည့်လိုက်တော့ မေမေ ဖင်ကားကား ဖြူဖြူကြီးသာ မြင်ရသည် နှစ်ယောက်လုံးအဝတ်စားမရှိ မေမေ ကိုယ်အောင့် အပေါ်မျက်နှာခြင်းဆိုင်ခွထားရာမှ ကျောပေးပြီး ကုန်းကာ အနောက်သို့တဖြေးဖြေုးဆုပ်ကိုယ့်အောင့်မျက်နှာနားအရောက်ကိုယ်အောင် လီးကြီးကြီးကို မယုံနိုင်ဖွယ် ပါးစပ်နှင့် လှမ်းငုံ ရေခဲချောင်းစုပ်သလိုစုပ်နေတော့သည် မေမေပါးစပ်နှင့် ကိုအောင်လီးကြီးက မဆံမပြဲကြီးဖြစ်နေသညိ့ပုံပင် အနီးကပ်ကြီးမြင်နေရသဖြင့် မီမီမြင့်တယောက် ကိုယ့်အမေဆိုပေမယ့် စိတ်ကစားတက်သည့်အရွယ် မို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနတ်ပူးသလိုလို အလိုလိုနေရင်းအာခေါင်တွေခြောက်လာသည် ကိုအောင်လီးကြီးကိုပြေးစုပ်ခြင်သလိုလိုနှင့် မိမိအဖုတ်ကလဲ ယားလာသည် သေချာလေးကြည့်လိုင်တော့ အို မေမေ စဖုတ်ကြီးကို ကိုအောင်လျက်နေတာပါလား…. မေမေ တစ်ချက်တစ်ချက် လီးကြီးစုပ်နေရာမှ မစုက်တော့ပဲ ခါးကြီးကော့ကော့ပြီး လီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် စုပ်ကာအပေါ်အောက် ကစားပြီး မနက်က ကိုယ်အောင် အိမ်သာထဲ လီးကြီးကို သူ့လက်နှင့်သူလုပ်နေပုံ မျက်နှာကြီးမော့ကာ အား…..မောင်ရယ် အရမ်းကောင်းတာပဲ မမ လင်အဲ့လိုတစ်ခါမှ မလုပ်ပေးဖူးဘူးကွာ တအားး တစ်အီးအီးနှင့် မေမေ. တီကောင်စားထိသလို့ တွန့်လိမ်နေသည် လိုးပါတော့ မောင်ရယ် လိုးတော့ မမ ကို လိုးပေးပါတော့ အီး မခံစားနိုင်တော့ဘူး လီးကြီးထည့်ပါတော့ မီမီလဲ ဖီးတွေတက်လာတာလား ဘာလားမသိ မနေနိုင်တော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ချွတ်ပြီး စဖုတ်ကို လင်ညိုးလေးနှင့် ကစားကာ ကြည့်နေမိသည် မောင်လိုးပေးပါတော့ …… မမ ကုန်းလိုက်လေ. လိုးပေးမယ် အမေဖင်ကြီးကို ကိုအောင်ပြောသည့်အတိုင်း ကုန်းလိုက်သည် ဖြူဝင်းနေသောဖင် ကြီးမှာ ကားပြီး အမွှေးတွေကြားမှ မေမေ အဖုတ်ကြီးကဖောင်းကားကာအနောက်သို့ ဆူထွက်နေသည်။
နုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်က ညိုမဲမဲ ဖြစ်နေပေမယ့် အတွင်းမှာတော့ ရဲနေသည် အရည်တွေကရွှဲကာ တွဲကျနေလေသည် ကိုအောင်အရည်တွေကို လျှာနှင့်သိမ်းကာ အဖုတ်မှ တဆင့် ခရမ်းရောင်သမ်းနေသော မေမေ့ ဖင်ပေါက်ဝကိုပါ လျှာကြီးနှင့် ယင်နေရာ မိမိပင် စအိုဝတွန့်တွန့်သွားလေသည် မောင်ရယ် မောင့်လီးကြီးနဲ့လိုးလိုင်ပါတော့ မမ မနေနိုင်တော့လို့ပါ မမ ခါးလေးခွက်ထား အောင်အောင် လီးကြီးနှင့် အဖုတ် ကိုအထက်အောက်ကစားကာ စအိုဝ အရောက် ဖိကာ ထနုးထည့်လိုက်သည် ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ်……. ဗြစ်….. အအား …….အား……..အမေ့ ကွဲပြီ သေပါပြီ တော့ မဆံ့ဘူး မဆံဘူး ပြန်ထုတ် ပြန်ထုတ် နာတယ် လို့ပြန်ထုတ် အဖုတ်ကိုလိုး အောင်အောင် မထုတ်ပဲ အားနှင့် တဆုံးထိုးထည့် ပလိုက်သည် အ …..အား……… ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ် အိုး…..သေပါပြီတော့ မေမေ ဖင်ဝမှ သွေးတွေစီးကျလာသည် မီမီမြင့် ဒေါသတော်တော် ထွက်သွားသည် ဒါပေမယ့် မေမေ နို့တွေ ကိုကစားပြီး မမ နာသေးလားဟင် မနာနေမလား မသာလေး တစ်ခါမှ မခံဖူးတဲ့ဖင်ကို နင်က အစိမ်းလိုးခွဲပစ်တာကို ကွဲလိုနာပေမယ့် ရပြီ လိုးတော့ ပြီးရင် အဖုတ်ထဲ ပြီးပေးနော် အခုမောင် လိုးချင် သလိုလိုး မမသိပ်မနာတော့ဘူး ကိုယ်အောင် မေမေ့ ဖင်ကြီးကို အားထည့်ကာ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် မေမေမှာ ဖင်ကြီးကို အရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးနေသည် လီးကြီးဝင်သွားတိုင်း စအိုဝကြီးကျုံ ဝင်ကာ ပြန်ထွက်လာတိုင်း စအိုနုတ်ခမ်းသားတွေက စူကာ သွေးတွေ ကေကျံနေသည် တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်အကြာ မမ ပက်လက်လှန်တော့ မောင် မမထဲ ပြီးမလို့ လိုးလိုး မမ အဖုတ်ရော ဖင်ပါ ကွဲပလေ့စေ လိုးသာလိုး မမလဲ ပြီးတာ နှစိခါရှိပြီ ခုလဲ ပြီးတော့မယ် ဖြောင်း ….ဖြောင်း ဗြွတ် ….ဗြွတ် ……ဗြွတ် အာ ပြီးတော့မယ် စောင့်အားနဲ့စောင့် စောင့် ဖြောင်းဖြောင်း.. အင့် . .အား… မောင်ပြီး ..ပြီး..လိုး… အား…နှစ်ယေက်သား တဟ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဘဖက်ကာ အကြောဆွဲသလို ဖြစ်ပြီးငြိမ် ကျသွားတော့သည် မီမီမြင့်တခါးဖွင့် ပြီး မသိမသာ ဆင်းပြေးပြီးအိမ်သာထဲ ဝင် ရေဆေးတော့မှ ဟယ် ငါ့ အတွင်းခံချွတ်ထားတာ မေ့ကျန်ခဲ့ပီ မေမေသိရင် တော့သတ်မှာ အောင်အောင်နှင့် အန်တီ ငယ်လေး မှိန်းနေရာမှ မောင်မမ ပြန်မယ် ဖင်တွေကျိန်းနေလို့ မမ ခဏနေဦး အခြေနေ သွားကြည့်ဦးမယ်။
အောင်အောင် အခန်းရှေ့ အထွက် ဟာအတွင်းခံ ဘောင်းဘီပါလား အင်း အိအိမျိုးကလဲ ဈေးဆိုင်မှာ အန်တီငယ်ကလဲ ဘောင်းဘီ မဝတ်လာဘူး သေချာကြည့်လိုင်တော့ ဟင် အရည်တွေနဲ့ ကြည့်ရတာ မီမီမြင့် ငါတို့ ညက နောက်ဖေးမှာလိုးတာ တွေ့ပြီးလာချောင်းတာတူတယ်ုဟုတ်ပြီ အောင်အောင် နောက်ဖေး တခါးဖွင့် အန်တီငယ်လေးနောက်ဖေးသို့ ကြည့်လိုက်ရာ ခေါင်းကုတ်ပြီးစိတ်ရှုပ်နေသော မီမီုမြင့်ကိုရွှတ် …..ရွှတ် လှည့်အကြည့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဖြန့် လျှာနှင့် ယက်ပြီး လီးကို လှန်ပြ လိုက်ရာ မီမီမြင့် ကိုကြီးနော် ဆိုပြီး အိမ်ထဲ ပြေးဝင်သွားလေတော့သည် အောင်အောင် တစ်ယောက် ကောင်းမှုကြောင့် အန်တီငယ်လေး နေမကောင်းခြင်ယောင်ဆောင် အိပ်ရာထဲ၃ရက်လောက် လှဲနေရသည် ယောက်ျားဖြစ်သူကလဲ မရိပ်မိ၍တော်သေးသည် လမ်းလျှောက်လို့ သိပ်မရ ဖင်ဝကအခုထိကို နာနေသည် အဆိုးဆုံးမှာ အိမ်သာတက်လျှင် နာခြင်းပင် မိမိဖင်သရမ်းသော အဖြစ် တစ်ခါမှ မခံဖူးပဲ ခံခြင်းဖီးတက်နေတုန်း ခံကောင်းနေတုန်းကတော့ ဘာမှမဖြစ် ယခုမှ ထိုင်မရထမရ ဖြစ်နေတော့သည်…. ပြီးပါပြီ။